राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी सिंहको २३ वर्षको उमेरमै निधन, ५ वर्षकै उमेरमा आमाबुवा गुमाएका उनी मामाको संरक्षणमा थिए – Sandesh Press
January 10, 2021 231
काठमाडौ । राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी २३ वर्षीय कुन्दनसिंह राजपुतको आज बिहान २३ वर्षका उमेरमा मिर्गौला रोगबाट निधन भएको छ । विसं २०६८ तिर महोत्तरी जिल्लाबाट जिल्ला क्रिकेट सङ्घको खेलाडी भएर १६ वर्षमुनि, राष्ट्रिय खेलाडीका रुपमा १९ वर्षमुनि र नेपाल क्रिकेट सङ्घबाट राष्ट्रियस्तरका खेल खेलेर राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता पाउनुभएका सिंहको आज बिहान महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका– ९ फुल्हट्टा गाउँस्थित घरमा निधन भएको हो ।
उहाँको निधनबाट जिल्ला, प्रदेश र सिङ्गो देशकै क्रिकेट जगत्लाई ठूलो क्षति पुगेको बताउँदै अध्यक्ष रोशनकुमारले उहाँलाई आज जिल्ला क्रिकेट सङ्घको झण्डा ओढाएर अन्तिम संस्कार गरिने बताउनुभयो । बाह्र वर्षका उमेरदेखि नै क्रिकेट खेल्दै आउनुभएका सिंह निकै मेधावी हुनुहुन्थ्यो । चारपाँच वर्षकै उमेरमा मातापिता गुमाउनुभएका क्रिकेटर सिंहलाई जलेश्वर– ९ का मामा अनोजकुमार सिंहले पालनपोषण गर्दै आउनुभएको थियो ।
कुन्दनलाई साउन १८ मा पिसिआर टेस्टबाट कोरोना पोजेटिभ समेत देखिएको थियो । कुन्दनले प्रदेश २ बाट दुई वर्षअघि काठमाडौंमा भएको प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय एकदिवसिय प्रतियोगितामा खेल्नुभएको थियो ।
Nextछोरी म छिट्टै नेपाल आउँदै छु भनेका ३८ बर्षिय पुर्ण बहादुर जापानमै सदाको लागि अस्ताए !
हाम्रा पूर्खाले बताएका यी ५ काम, साँझ परेपछि नगर्दा बर्सिन्छ लक्ष्मी माताको कृपा
म बाँ, च्नु त अब के का लागि ? सडकछाप भनेर चिनिए